जन्डिस भए के गर्ने ? - Health Today Nepal
जन्डिस भए के गर्ने ?
December 4th, 2017 स्वास्थ्य सुझाब0comments
डा. ललित श्रेष्ठ
जन्डिस जुनसुकै मौषमा पनि हुनसक्छ । यो बिशेषगरि कलेजोसम्बन्धी रोग हो । यो रोगका विषाणुले कलेजोका कोषिकाहरूलाई क्षति पु¥याउँछ । समयमा उपचार हुन नसकेपछि कलेजोले काम गर्न छाडी रोगीको मृत्यु हुन सक्छ । यो रोगलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । सामान्यतया प्रदूषित पानी पिउनाले, बासी खानेकुरा खानाले र सरसफाइमा ध्यान नदिनाले यसको संक्रमण भएको पाइएको छ । यो सबै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई हुन सक्छ ।
कसरी थाहा पाउने जन्डिस भएको ?
बिरामीलाई सुरुको अवस्थामा थकाइ लाग्छ र पेट दुख्छ, दिसाको रङ फुस्रो हुन्छ,खान मन नलाग्ने हुन्छ । विस्तारै शरीरका अंगहरू जस्तै आँखा, नङ, छाला र अन्य भागमा पहँेलो हुने साथै पिसाब पहेँलो हुन्छ । माथिका चिन्ह र लक्षणहरू झन्डै ७–१० दिनसम्म रहन्छन् र कहिलेकाहीँ तीन महिनासम्म पनि देखिन्छन् ।
यसो गर्दा जन्डिस सर्छ :
राम्ररी जाँच नगरी रगत लिँदा वा दिँदा, निर्मलीकरण नगरिएको सिरिन्ज, रौं खौरने तथा चिरफार गर्ने औजारहरूको प्रयोग गर्दा । दाँत सफा गर्ने ब्रस, दाह्री काट्ने ब्लेड र तौलिया साझा रूपमा प्रयोग गर्दा, संक्रमित व्यक्तिको चुम्बन र यौनसम्पर्क गरेमा । संक्रमित व्यक्तिको दिसापिसाबबाट पानी प्रदूषित भएमा र प्रदूषित पानी पिएमा ।
जन्डिसबाट बच्ने उपायहरू
व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, पानीलाई उमालेर, छानेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गरेर वा सोडिस प्रविधि गरेर मात्र पिउने, खानेकुरा, सागपात र तरकारीलाई राम्रोसँग सफा र सुरक्षित पानीमा पखालेर राम्ररी पकाएर खाने । पानीको मुहान सफा राख्ने, बिरामीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हात साबुनपानीले धुने, नङ छोटो र सफा राख्ने । चर्पीमा मात्र दिसा, पिसाब गराउने, तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गराउने र स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सल्लाहबमोजिम औषधि खाने । जाँड, रक्सीको सेवन नगर्ने, रगत लिँदा परीक्षण गरेको रगत मात्र लिने, सुई लगाउँदा वा धारिलो उपकरणको प्रयोग गर्दा निर्मलीकरण गरेको मात्र प्रयोग गर्ने, सुरक्षित यौन व्यवहार गर्ने ।
Previous article पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन प्याप स्मेयर
Next article मिर्गौला बचाउने कार्यक्रम खै ?